Magaca Jwxo-shiil oo Laga Helay Liis Saraakiil Somali ah oo Cali Samatar Codsaday – Rasaasa News
Aug 19, 2009 Jwxo-shiil
Xukuumada Itobiya ayaa dacwad u gudbisay dawlada Maraykanka, ka dib kolkii laga helay magaca Jwxo-shiil, liis la soo saaray oo ay ku qoran yihiin magacyada raxan saraakiishii hore ee Somaliya ah. Dhawaan ayey ahayd kolkii ay dawlada Maraykanku codsatay in la helo saraakiishii hore ee Somaliya, si wax looga qabto dhibaatooyinka loo caal waayey ee haysta dalka Somaliya.
Sida lagu qoray bogga Sudantribune, waxaa uu Maraykanku doonayaa in saraakiishaas dib loogu furo siminaaro is faham ah iyaga oo horjooge looga dhigay Maxamed Cali Samatar, oo in muddo ahba qaxootinimo ku jooga dalka Maraykanka. Waxaana qaybtii ugu horaysay ee saraakiishan ay ku kulmeen dalka Maraykanka bishan bilowgeedii, waxaana la shaaciyey saraakiisha loo baahan yahay in ay yimaadaan si ay uga qayb qaataan sidii loo xasilin lahaa dalka Somaliya.
Hadaba, xukuumada Itobiya ayaa waxay ku samaysay sixitaan [censorship] magacyada saraakiisha Somaliya, waxayan ka dhex heshay Jwxo-shiil, waxayna isla markii dacwad u gudbiysay dawlada Maraykanka, waxayan canaan u soo jeedisay dawlada taagta daran ee Shariif Sheekh Axmed.
Dawlada Maraykan ayaa si cad ula hadashay dawlada Itobiya iyada oo leh, imis dagaal ooge ayaa Somaliya ka jiray way badan yihiin, Jwxo-shiil waxaa uu ka mid yahay dagaal oogayaalka Somaliya, hadii uu ka heli karo meel ka dagaalamana Somaliya kama soo baxeen. Jwxo-shiil waxaa uu dagaal ka bilaabay gabalkiisii, wuxuuna arkay uun dagaal Oogayaal Somaliyeed oo ka dagaalamaya gabaladii ay ka soo jeedeen sidaasi ayeyna wax dhib ah u lahayn arintiisu.
Dawlada Maraykanku waxay ku qancisay Itobiya, in uu Jwxo-shiil ka mid yahay dagaal Oogayaalka dhibaateeyey Somaliya, hadii uu shaqo helana uusan dib u soo galaynin gabalka Ogaden, waxaana arintaas daliil u ah Jwxo-shiil Janan buu ka gaadhay Somaliya waligiina ma uusan ka dagaalamin gabalka Ogaden, wax ku kalifay in uu ka dagaalamo gabalka Ogadeen ayaa jira waanan xalinaynaa arintaas.
Xukuumada Itobiya ayaa arintan markii loo sharxay si aad ah ugu guuxday, waxayse aad uga aamin baxsan tahay Jwxo-shiil, oo ay dhawr goor oo hore lacag ugu dhiibtay Cabdulahi Yuusuf sanadkii 2004/05, markii ay ka dhamaatay lacagtiina waxaa uu codsaday in la siiyo lacag kale.
Jariiradu, waxay aad ugu dheeraatay, in hadii arintaas dawlada Maraykanu hir galiso, in ay iman karto xumaan iyo wanaag labaduba sida; saraakiil lacag iyo ciidan heshay oo aan 20 sano dawlad arag dhibkeeda ayey lee yiahiin, hadii ay dalka Somaliya xasiliyaana waxaa soo noqon khatartii Itobiya waligeedba haysatay oo sii gaamurtay. Wayna adag tahay in Saraakiishan la ururinayo la siiyo wax ay u baahan yihiin waayo waa seef labo af leh. Si kastaba ha ahaatee Jwxo-shiil ayaa ka fikiraya wixii uu ka yeeli lahaa arinta loo soo ban dhigay, waxaana suurto gal ah in uu isugu yeedho xubnaha isaga taageersan dalka Eritariya uuna u sheego in ay keensadaan ruuxa ay jecel yihiin in uu sii wado garabka Jwxo-shiil oo sida la filayo waa dhaw loogu yeedhi doono garabka Qaaxo.
Si kasta ha u dhacdo saraakiisha la sabayaaye, waxaa aan sugaynaa dhamaadka bisha Ramadaan in kooxda Jwxo-shiil looga yeedho dalka Eritariya iyada oo ay ku adkaan doonto qaar ka mid ah in ay halkaasi tagaan, sababo ku saabsan dacwado ku socda awgood.